I-Seychelles yoKhenketho "uMboniso waseNdleleni woNyaka waseMntla Melika" UyaQiniseka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho "Umboniso wonyaka waseMntla Melika" uhamba ngokuBonakalayo
Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
I-Seychelles yoKhenketho "Umboniso wonyaka waseMntla Melika" uhamba ngokuBonakalayo
I-Seychelles yoKhenketho kuye kwafuneka yenze izinto ngokwahlukileyo kulo nyaka kwi "North America Yearshow" yayo ngenxa ye-COVID-19. Ukulandela ukungabikho kweminyaka emi-2, umboniso wendlela, oqhele ukuya kwizixeko ezi-4 zase-US, wenziwa ngoLwesithathu, nge-25 kaJuni, kwaye emva kwempumelelo yawo, umsitho wesibini uza kubanjwa ngoLwesithathu, nge-18 ka-Agasti, 2021.
Ukhenketho lwaseSeychelles lubonakalise ngempumelelo umboniso wendlela wonyaka waseNyakatho Melika kwifomathi ebonakalayo kulo nyaka.
Kwakukho iingcali zokuhamba ezingama-65 zase-US ezithathe inxaxheba zivela kwizixeko ezingaphesheya kwe-US usuku oluvelisayo lweentlanganiso kunye notshintshiselwano.
Bonke abachaphazelekayo babone oku njengesiganeko esifanelekileyo xa kuthelekiswa neminyaka emi-2 eyadlulayo xa yayirhoxisiwe kungabikho ezinye iindlela ngenxa ye-COVID-19.
Ukujoyina ilizwe liphela ekwamkeleni amaqonga edijithali ukufikelela kumaqabane abo, abaqhubi bezokhenketho baseSychelles, kubandakanya uMason's Travel, iiCreole Travel Services, kunye neqabane lenqwelomoya iQatar Airways batyikitye njengababonisi beminyhadala ebibanjwe nge-7 ukuya kwi-9 ngokuhlwa (iSeychelles ixesha) ngoJuni 25, xa babedityaniswa ziingcali zokuhamba zase-US ezingama-65 ezivela kwizixeko ezahlukahlukeneyo zase-US usuku oluvelisayo lweentlanganiso kunye notshintshiselwano.
Emva kokwamkelwa ngokufudumeleyo ngu Seychelles yoKhenketho Iqela, abathathi-nxaxheba kunye nababonisi baqhubekile beqhuba iintlanganiso zomntu ngamnye apho babetshintshiselana ngolwazi malunga neemeko zentengiso ezikhoyo ngoku, iinkqubo zokhuseleko ezenziwa ngabachaphazelekayo baseSeychelles kunye nophuhliso malunga nemveliso emitsha ngaphakathi kwindawo esiya kuyo.
Umboniso wendlela wawubanjelwe okokuqala ukusukela ngonyaka we-2018 wathi uMlawuli weSithili sase-Seychelles we-Afrika kunye neMelika, uDavid Germain. "Ngo-2019 nango-2020, khange sikwazi ukuqhubeka nomboniso wendlela, kodwa njengoko ubhubhane uqhubeka, siye sagqiba kwelokuba siwenze lo mbhiyozo, sanelisekile ngabo bonke abo sisebenzisana nabo nabathathi-nxaxheba," utshilo uMnu Germain.
Umdla eSeychelles uhlala uphezulu e-United States nangona bukhona ubhubhane, waqinisekisa, ngakumbi phakathi kwabahambi abahamba kude ukuya kumazwe ase-Afrika nakuMbindi Mpuma ngeholide, emva koko baya eSeychelles njengolwandiso kwiholide yabo. I-1,934 iindwendwe ezivela eMelika zityelele iSeychelles ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka ukuya kuthi ga kwi-18 kaJulayi.